FAMONOANA SINOA TENY IVATO : Karohina fatratra i Jiang Shao Wei, tera-tany sinoa
Tsy nitsaha-nikaro-baovao ny Polisim-pirenena, taorian’ilay habibiana nihatra tamina tera-tany sinoa mivady hita faty tao amin’ny hotely lehibe iray, eny Antanetibe-Ivato ny zoma maraina lasa teo. 20 mars 2017
Fantatra izao fa lehilahy iray teratany sinoa ihany antsoina hoe Jiang Shao Wei no tompon’antoka tamin’ny famonoana azy ireo. Ity farany izay mbola tsy hita popoka ary karohin’ny Polisy fatratra amin’izao.
Araka ny vaovao azo dia io lehilahy io no nanofa ilay efitrano natorian’izy mivady tao amin’ny hotely. Ny fiaran’izy ireo ihany no noentiny nitsoaka avy eo rehefa vita ny habibiana rehetra. Tamin’ny fikarohana natao no nahalalana fa nitsoaka eny Amboanjobe ilay nahavanon-doza kanefa tamin’ny fotoana nahatongavan’ny mpitandro filaminana teny an-toerana dia efa tsy tratra tao intsony ity nokarohina fa ilay fiara 4x4 azy mivady no hita teo ivelan’ny trano ary efa voasolon’ilay olon-dratsy soa aman-tsara ny laharany. Raha ny fanazavana nomen’ny Polisy misahana ny fanadihadiana dia tsy vitan’olon-tokana ny namono azy mivady ireto izay tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka.
Tao amin’ny efitrano fidiovana no nanaparena ny ainy tamin’ny alalan’ny tsindron’antsibe sy maritoa. Mbola tavela nihosin-dra tao amin’ny toerana namonoana azy ireo fitaovana ireo. Ny alakamisy ny zanak’izy mivady ireto no tonga nametraka fitoriana tetsy amin’ny BC Anosy mahakasika ny tsy fahitana ny ray aman-dreniny. Teo no nanomboka ny fikarohana rehetra ka niafara tamin’izao fahitana ny fatin’izy ireo. Raha tsiahivina mpiasa mpanadio trano teo anivon’ny hotely no nahita ilay rangahy sy ny vadiny nihosin-dra tao anaty trano, izy ireo no nampilaza ny tompon’andraikitra ary ireto farany indray no niantso Polisy. Karohana fatratra ilay Sinoa nahavanon-doza amin’izao.